Kahor kulanka finalka FIFA Club World Cup, Modrić oo ka hadlay sirta ka dambeysa guulaha uu ka gaaray kubada cagta – Gool FM
Kahor kulanka finalka FIFA Club World Cup, Modrić oo ka hadlay sirta ka dambeysa guulaha uu ka gaaray kubada cagta
(Spain) 21 Dis 2018. Luka Modrić ayaa daaha ka rogay xaqiiqda iyo sirta ka dambeysa guulaha uu ka gaaray kubada cagta, kadib markii uu noqday ciyaaryahanka ugu fiican aduunka, isla markaana uu ku guuleystay abaal marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or.
Laacibka reer Croatia ayaa wareysi uu bixiyay kahor kulanka ay bari kooxda carbeed ee Al Ain kula ciyaari doonaan finalka FIFA Club World Cup wuxuu ka hadlay guulaha uu ka gaaray kubada cagta.
“Marka hore dad badan ma aysan i aaminin, waan faraxsanahay waxay ugu dambeyntii qireen wax walba ee aan sameeyay xirfadeyda kubada cagta, waxay ahayd inaaan ku guuleysto waxyaabo badan sidan oo kale”.
“Waxaan ku noolaa noloshayda xaalad aan la hubin ee shaki ah tan iyo caruurnimadeyda dhanka awooda jireed, balse aniga marna kama shakinin nafteyda”.
“Sababa la xiriira kalsoonidii aan siiyay nafteyda, waxaan noqday kan ugu fiican aduunka, bilawga dad badan ma aysan igu kalsooneyn, taasina waa qeyb ka mid ah nolosheyda, waxaan xili kasta ahaa midaan lagu kalsooni qabin, Marwalba waxaan maqli jiray inaan gaari doonin meel sare”.
“Abaal marinadan oo dhan ee aan ku guuleystay, sida Ballon d’Or iyo FIFA The Best waxay ka dhigan tahay wax badan, gaar ahaan marka aad ogaatid in qofna uusan waxba kuu qabanin, waxaana wax walba ugu guuleystay shaqadii adkeyd ee aan qabtay”.
SAWIRRO: Neymar oo TINTA u jartay sida Baasto Spaghetti